Window Screen - China Hebei Samsung Metal waya ntupu
Window Screen Introduction A window ihuenyo, ụmụ ahụhụ na ihuenyo ma ọ bụ ofufe ihuenyo bụ a metal waya, faiba glaasi, ma ọ bụ ndị ọzọ sịntetik eriri ntupu, agbatị na a etiti nke osisi ma ọ bụ metal, iji kpuchie ihe oghere nke ihe na-emeghe window. Ya isi nzube ya bụ iji na-epupụta, irighiri, ụmụ ahụhụ, ụmụ nnụnụ, na anụmanụ ndị ọzọ si na-abanye a ụlọ ma ọ bụ a ekpuchi Ọdịdị dị ka a owuwu ụzọ mbata, mgbe ekwe ọhụrụ ikuku-eruba. Ọtụtụ ụlọ na Australia, na United States na Canada nwere meziri na niile operable windo, whic ...
Min.Order ibu: 1 Roll / apụta
Tụkwasịnụ Ikike: 1000 Roll / apụta kwa Day
A window ihuenyo, ụmụ ahụhụ na ihuenyo ma ọ bụ ofufe ihuenyo bụ a metal waya, faiba glaasi, ma ọ bụ ndị ọzọ sịntetik eriri ntupu, agbatị na a etiti nke osisi ma ọ bụ metal, iji kpuchie ihe oghere nke ihe na-emeghe window. Ya isi nzube ya bụ iji na-epupụta, irighiri, ụmụ ahụhụ, ụmụ nnụnụ, na anụmanụ ndị ọzọ si na-abanye a ụlọ ma ọ bụ a ekpuchi Ọdịdị dị ka a owuwu ụzọ mbata, mgbe ekwe ọhụrụ ikuku-eruba. Ọtụtụ ụlọ na Australia, na United States na Canada nwere meziri na niile operable windo, nke bụ kasị bara uru na ebe nke nwere nnukwu anwụnta bi na. N'oge gara aga, hụ na i meziri na North America na-emekarị dochie na iko oké ifufe windo na oyi, ma ugbu a abụọ ọrụ na-na-jikọtara na Nchikota oké mmiri ozuzo na ihuenyo windo, nke ka iko na ihuenyo ogwe slide na ala.
Ụdị Of window Screenu Fabric
The kasị ihe eji maka ụmụ ahụhụ na echetakwa ihe onwunwe bụ aluminum na faiba glaasi. Aluminum window ihuenyo bụ n'ozuzu dị na eke aluminum ma ọ bụ na ihe etinyere unyi agba; na unyi nnọọ obere anya. Faiba glaasi dị na ìhè na agba ntụ nakwa dị ka unyi na agba, na unyi ọzọ àjà mma ikiri na anya. Faiba glaasi bụ obere ọnụ, na nwere uru nke bụghị "denting" mgbe kụrụ ma ọ bụ kewapụrụ. Otú ọ dị, faiba glaasi ntupu dị dịtụ ọzọ opaque karịa aluminum ntupu, darkens mpụga ọdịdị nke window na ebelata ego nke ìhè-ebute site ná si n'èzí. Ke adianade do, faiba glaasi ihuenyo agbazee ngwa ngwa na n'ebe UV ìhè, na-eduga na ya fraying na-agbasa mgbe naanị afọ ole na ole, n'adịghị aluminum nke dịruru ukwu ogologo.
Maka ngwa nke chọrọ nwekwuo ume, dị ka ákwà ụzọ, naịlọn na polyester echetakwa ndị dịnụ.
Ọla ahụhụ echetakwa bụ ihe ndị ọzọ dị oké ọnụ, ma na-enye ogologo ọrụ karịa ma aluminum ma ọ bụ faiba glaasi. Mgbe mbụ wụnye window ihuenyo, o nwere a na-egbuke egbuke gold agba; a ihu igwe na unobtrusive ọchịchịrị unyi n'ime otu afọ ma ọ bụ obere. Ọla dị dịtụ ọzọ eguzogide denting karịa aluminum. Naa nkịtị ihuenyo akwa gụnyere ọla kọpa, ọla, igwe anaghị agba nchara, na galvanized ígwè.
Ke adianade ahuhu screening, denser ihuenyo ụdị na-belata ìhè anyanwụ na okpomọkụ uru dị. Ndị a na-enye ịrịba nwere ike ego na-ekpo ọkụ climates.
Ime-ya-onwe gị na ihuenyo na etiti nnọchi ngwa iwu bụ dị ọtụtụ ebe na ngwaike na home mma na-echekwa. Ndị a osisi na-na-ekewet nke ogologo aluminum n'akụkụ (nke nwere ike a ga-ebipụ ka size) na plastic nkuku inserts. Screen nnọchi ngwa iwu na-emekarị iso nke a mpịakọta nke naịlọn echetakwa ákwà na a na-emesapụ aka ọkọnọ nke roba spline.
Previous: Faiba glaasi Plain kpara Waya netting
Osote: Staninless Steel waya ntupu
8x8 kpara Waya Screen
faiba glaasi Window Screen
kpaliri Iron Window Screen
Igwe anaghị agba nchara Screen waya ntupu
igwe anaghị agba nchara Window Screen
Nkpirikpi Waya Screen
Anụ Mmịkpọ Grịl netting
Construction ntupu Panel
Welded ntupu Panel-Hot-Itinye kpaliri Afte ...
Hot tinye kpaliri Waya
Crimped waya ntupu
nwee ume Waya